Christchurch: 56,000 oo qori oo lagu qabtay New Zealand weerarkii masaajidda kaddib - BBC News Somali
Christchurch: 56,000 oo qori oo lagu qabtay New Zealand weerarkii masaajidda kaddib
Hubka ay New Zealand ka soo uruurisay shacabka
Dowladda Nwzealand ayaa sheegtay iney lix bilood gudahooda shacabka kaga soo uruurisay in ka badan 56,000 oo qori.
Tallabada ay dowladda New Zealand hubka ku soo uruurineyso ayaa timid kaddib marki uu dhacay weerarki Christchurch ee lagu dilay 51 qof oo muslimiin ah, waxayna dowladdu gabi ahaanba shacabka ka manuucday istciamaalka iyo haysashada hubka.
Xayiraadda hubkana waxaa ansixiyey baarlamaanka dalkaasi 15-ki bisha March waxyar un kaddib marki uu dhacay weerarki Christchurch ee New Zealand.
Waxaana weerarkaasi dacwad looga soo oogay Brenton Tarrant oo Autralia u dhashay oo aaminsan sarreynta midabka caddaanka.
Xayiraaddaasi malagu guuleystay?
Hirgelinta xayiraadda hubka ee New Zealnd waxay billaabatay bishi April.
Hubka ay dowladda ka soo uruurisay shacabka waxay mulkiilayaasha hubka ay magdhaw ahaan ugu celisay 95% qiimaha asal ahaan ay hubka ku soo iibsadeen.
Gabadh yar oo isku dayday inay laaluushto Ra'iisul wasaaraha New Zealand
Barnaamijkan hub uruurrinta New Zealand wuxuu ku egyahay 20-ka bisha December.
Wasiirka booliska dalkaasi wuxuu yiri: "inaan shacabka ka soo ururinno in ka badan 50,000 oo qori ay tahay arrin wanaagsan."
Afhayeen u hadasha koox u ololeysa ka hortagga hubka sharci darrada ah Nocole McKee oo u warrantay wargeyska New Zealand Herald McKee waxay sheegtay iney aaminsan tahay dalka New Zealnd iney shacabka gacantiisa ku jiraan hubka dalka laga mamnuucay oo gaaraya 170,000 oo qori.
Mar ay ka hadleysay dadka hubka haystana waxay sheegtay: "Dadka qaar hubkooda wey qarsanayaan, qaar waxay aaminsan yihiin iney isku difaacayaan, qaar si wanaagsan u isticmaalana wey jiraan marka ma garanaya sida ay wax u socdaan."
2016-kina booliska New Zealand hubka sharciga ah ee shacabka gacantiisa ku jira waxay ku qayaaseen 1.2 milyan oo qori, taasoo u dhiganta afarti qofba qof ka mid ah inuu qori haysto.
Christchurch maxaa ka dhacay?
15-ka Bishii April, Brenton Tarrant ayaa weerara masaajidka Al Noor ee ku yaalla iyo xarruun islaami ah ee Lin Wood oo ku taalla Christcurch.
Ninka weerarka geeystay
Waxaana lagu soo oogay dacwad ah inuu dilay 51 qof, 40 qofna uu damcay inuu dilo inuu fal argagixso geystay.
Dadkii la laayey iyaga oo masaajid ku dukanaya
50 qof ayaa lagu dilay weerarra loo geystay muslimiin iyada oo qaar kalana ay ku dhaawacmeen laba masaajid oo ku yaalla magaalada Christchurch taariikhdu markay ahayd 15-ka March.
Toogashadii New Zealand: Qoyskeyga waxaan uga sabri karaa 'inuu soo islaamo ninkii weerarka fuliyay'
Sheekooyinka halyaynimada ah ee ka soo baxaya weerrarkii Masaajidda
Nin weerarkaasi geystayna wuxuu ku hubeysnaa qori darandoorri u dhaca isaga oo qoriga wax ka beddelay si uu rasaas badan u qaato.
Maxkamadda dacwadda eedeysanaha weyday waxay ku weyday dhammaan dacwadihi lagu soo oogay iyada oo markale dacwaddiisa dib u eegis lagu sameeynaya sanadka soo socda.
Dacwadaasi miyey sababi kartaa in dalka uu ka bilawdo ururo argagixiso ah?
Sidee ayay dawladda New Zealand uga falcisay markii uu dhacay weerarka misaajiddada?
Sharciga cusub ee oggolaanshaha hub-qaadashada New Zealand
Qaar ka mid ah dadkii ku dhintay weerarkii Christchurch
Shan qodob ka ogow dekedda la ballaariyay ee Berbera
Lix arrin ka ogow lacagaha aan la arkeynin ee laga daba dhacay